Ederede Blog site na Paolo Tescione
Via Mazzocchi, 195 S. Maria Capua Vetere
OKWU A B ISGH A AKW NEWKWỌ Ọ B AND Ọ B ANDGH NEW ỌZỌ NA-EJUGH GO MA Ọ BUR Ebumnobi ya bụ ịgbasa okpukpe na ikwere na Chineke.
TAX CODE: TSCPLA76P28I234Y
Emere ebe nrụọrụ a na idobe iwu nwebiisinka. Onye ọ bụla chọtara ọnụnọ nke ihe ha nwere, mee ya ka ọ dị ugbu a, ọ bụrụ na ha chọrọ, anyị ga-ewepụ ya ozugbo.
Chukwu agwa m obi m banyere Paolo Tescione
1 faịlụ (s) 244.90 KB
Ọnye na-bụ Paolo Tescione?
Abụ m nwa nwoke 44 dị n'ógbè Caserta. Mgbe m biri ndụ dị obere n'oge m bụ nwata n'ajụghị onwe m ihe ndụ pụtara, ewepụtara m onwe m iji zaa ụfọdụ ajụjụ miri emi banyere ịdị adị na ụfọdụ azịza. Azịza kachasị mkpa m natara bụ na ọ bụ Chineke kere anyị na mmadụ, wee kee ụwa a, yabụ anyị enweghị ike ibi ndụ dịka nkwenkwe na-ezighi ezi ma ọ bụ na-enweghị isi mana anyị ga-eme ka ndụ anyị nwee isi.
EGO NA-EKWU M MAKA CHINEKE
dị na Amazon
“Are bụ m kachasị mara mma ma bụrụ ihe pụrụ iche nye m. Don'tnu echeghi, Mu onwem bu Chineke, chighari iru n’ebe unu nọ? Mụ, onye bụ Chukwu, enweghị ihe kpatara ịdị ma ọ bụrụ na emeghị m gị. Mụ onwe m bụ Chukwu, bie ndụ na iku ume site na gị, anụmanụ m mara mma na nke m hụrụ n'anya nke ukwuu. Ma ub nowu a were obi-gi nile laghachikutem, emela ka ndu-gi gabiga n’enweghi onye n’amaghi ama nwa oge n’ano hu gi n’anya. Echegbula, ahụrụ m gị n'anya ma ọ bụrụ na ịgaghị ama m ihe m ga-eme ". (Chineke Nna)